Diyaarad hawada ku jirto oo shidaal ku dul daadisay Iskuullo |
Diyaarad hawada ku jirto oo shidaal ku dul daadisay Iskuullo
Diyaarad rakaab ah ayaa shidaalka daadisay xilli ay hawada mareysay, wuxuu shidaalka ku kor daadatay ardey wax ka dhiganeysay dhowr Iskuul oo ku yaalla halkaas, diyaaradda ayaa si degdeg ah ugu soo degtay garoonka diyaaradaha ee Los Angeles ee dalka Mareykanka.
Ugu yaraan 60 qof oo u badnaa ardey ayay waxyeello kasoo gaartay shidaalka ay daadisay diyaaradda, waxaana dadkaas soo gaaray dhibaatooyinka dhanka caafimaadka ah sida inay ku dhibtoodeen neefsiga.
Waxay arrintani ka dambeysay markii diyaaradda ay cilad ku timid matorkeeda.
Shidaalka diyaaradda ay hawada ku sii deysay waxaa uu saameeyay ilaa lix Iskuul, dadkii ay waxyeelleynta kasoo gaartayna waa la daweeyay.
Elizabeth Alcantar oo ah Mayarka deegaanka Cudahay ayaa sheegay inuu ka xun yahay tallaabada ay ku dhaqaaqday diyaaradda.
Maamulka diyaaradda ayaa xaqiijiyay in diyaaradda ay daadisay shidaalka xilli ay hawada mareysay si ay u yareyso culuskeeda markii ay si deg deg ah uga soo caga dhiganeysay garoonka diyaaradaha ee aggaas.
Allen Kenitzer, oo ah afahayeen u hadlay maamulka hawada federaalka ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay “in maamulka hawada ay si qotodheer u baarayaan dhacdadaas isla markaasna ay jiraan qaabab gaar ah oo ay diyaaradaha shidaalka u qubi karaan marka ay hawada marayaan.
“Qaababkaas waxay yihiin in diyaaradaha ay shidaalka ku sii deyn karaan hawada gaar ahaan deegaanno loogu talagalay oo aysan dadka daganeyn, gaar ahaan hawada sare” ayuu yiri Allen Kenitzer.